အနံ့ပြင်းသလို … အစွမ်းလည်းပြင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အနံ့ပြင်းသလို … အစွမ်းလည်းပြင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ
အနံ့ပြင်းသလို … အစွမ်းလည်းပြင်းတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ
Posted by etone on Jan 31, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, Short Story | 8 comments
ကြက်သွန်ဖြူကို လူအများစုက ကြိုက်ကြပေမယ့် … သူ့ရဲ့ ပြင်းလှတဲ့ အနံ့ကြောင့် အများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့ အလုပ်ခွင်တွင်းနဲ့ ပါ့ဘလစ်နေရာမျိုးကို ရှောင်ပြီး အိမ်မှာသာစားကြတာများပါတယ် ။တစ်ချို့ကလည်း ကြက်သွန်ဖြူကို ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်နေဖြင့် ဆီသတ်စားကြသလို ၊ တစ်ချို့ကလည်း အသုတ်လိုမျိုး ၊ ဘိတ်ချဉ်လိုမျိုး ထည့်သုံးကြတယ် ။ ဒါ့ပြင် ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီချက်ချက်ပြီး အသီးရွက်တွေနဲ့ အသုတ်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း ၊ လ္ဘက်နဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့လည်းကောင်းစားကြတယ် … ။ ကျွန်မလည်း ကြက်သွန်ဖြူကြိုက်ပေမယ့် ….. အများနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အလုပ်ချိန်တွင်းမှာတော့ မစားဖြစ်ပါဘူး … ။ ကြက်သွန်ဖြူက အနံ့ ပြင်းသလို သူ့ရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်မှုကလည်း ပြင်းပြင်းပျပျ ရှိလှပါတယ် … ။
ကြက်သွန်ဖြူစားခြင်းအားဖြင့် ကိုလက်စထရော(အဆီဓါတ်) ကိုလျော့ကျစေခြင်း ၊ သွေးကြောတွင်းသွေးခဲမှုကို ဟန့်တားပေးခြင်း ၊ သွေးဥမွှားများ စုခဲခြင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း ၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို လျော့ချပေးခြင်း ၊ သွေးပျစ်ခဲမှုကို ကျဲစေခြင်း ၊ သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေခြင်း ၊ အဆစ်မြစ်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သက်သာစေခြင်း ၊ ပန်းနာရောဂါထမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့နည်းစေခြင်း ၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းသွေးယိုခြင်းနဲ့ အူတွင်းရောဂါ စတဲ့ … အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို လျော့နည်း စေပါတယ် … ။
ကြက်သွန်ဖြူမှာ ပါတဲ့ ajoene ဓါတ်က သွေးခဲမှုကို ဟန့်တား တားဆီးပေးပြီး ၊ အာရီနယ်လင်ဟိုမုန်း၊ ပရိုစတာဂလင်အေနဲ့ အီးဟိုမုန်းတို့ပါလို့ သွေးတိုးရောဂါအတွက်များစွာ အထောက်ကူပြုပါတယ် ။ ကြက်သွန်ဖြူမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဓါတ်တိုးပစ္စည်း ပယ်ဖျက်ဓါတ် ၁၅မျိုးလောက်ပါတာကြောင့် နှလုံးရောဂါကာကွယ်မှုကိုလည်း အထောက်ကူပြုပါတယ် ။ ကိုလက်စထရော ၁၀%ကနေ ၁၅ %ထိ နည်းပါးလျော့ကျစေဖို့ … တစ်နေ့ကို ကြက်သွန်ဖြူ သုံးမွှာလောက်စားပေးသင့်ပါတယ် ။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ ဆေးဖက်ဝင်လှပြီး တစ်နေ့ နှစ်မွှာလောက်စားရုံနဲ့ သွေးကြောတွင်းသွေးခဲမှုကို တားဆီနိုင်ပါသတဲ့ … ။ ကြက်သွန်ဖြူစားပေးခြင်းအားဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့် သွေးပျစ်ခဲခြင်းမှ သွေးကျဲခြင်းအတွက်ကိုလည်း အထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ် ။ ဒါ့ပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေခြင်းကြောင့်လည်း သွေးချို ၊ ဆီးချိုရောဂါတွေကို သက်သာစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။ ပန်းနာရင်ကြပ်အခံရှိသူများအနေဖြင့်လည်း ရောဂါပြန်မထအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ် ။ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ၊ လိပ်ခေါင်းသွေးယို ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါတွေကိုပါ လျော့နည်းစေတဲ့ ကြက်သွန်ဇြူကို တတ်နိုင်သလောက်စားပေးသင့်ပါတယ် … ။
ကြက်သွန်ဖြူကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စားသောက်ရမှ … စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးကိုရရှိဖို့ဆိုလျှင် ကြက်သွန်ဖြူကို ခွာပြီး ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် လေသလပ်ခံပြီးမှသာ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော် ၊ အစိမ်းစားသင့်ပါတယ် ။ ၁၅ မိနစ်လေသလပ်ခံနေတဲ့ အချိန်တွင်း အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုမှ အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်တွေ ရှိလာတာကြောင့်ပါလို့ မှတ်သားရပါတယ် ။ ကြက်သွန်ဖြူကိုချက်ရာတွင်လည်း … ချဉ်သောအသီး၊ အချဉ်ဓါတ်ရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် ရွေးချက်လျှင်လည်း သင့်တော်ပါတယ် … ။ ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ ajoene ဓါတ်ကို အချဉ်ဓါတ်က အလေလွင့်မဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်လို့ပါပဲ … ။
အနံ့ပြင်းလို့ ကြက်သွန်ဖြူမစားရဲတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း ကြက်သွန်ဖြူကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆေးတွေ … ဈေးကွက်တွင်းအများကြီးပေါ်ထွက်လာကြပါပြီ ။ အစာလည်းဆေး ၊ ဆေးလည်း အစာဆိုတဲ့ စကားရှိတာမို့ … အိမ်သုံးဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်ကြက်သွန်ဖြူစားရင်း … အသက်ရှည်၍ အနာမဲ့ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်နော် ။
ကျေးဇူးပါ။ မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကိုစားတော့စားတယ်။ အရမ်းလဲမစားရဲဘူ။ ပြသနာကချွေးထွက်ရင်နံတာပဲ။ ပါးစပ်ကသွားတိုက်လို့ရပေမဲ့ချွေးကျတော့ထွက်တိုင်းနံတာ။
အောက်စိဒင့်) ဖြစ်စေလို့ ကင်ဆာဖြစ်ပွါးမှုကိုကာကွယ်၊လျှော့ချစေပါတယ်လို့ ဖတ်ဘူးပါကြောင်း။
ကျနော်သိသလောက်ကတော့ လေသလပ်ခံတယ်ဆိုတာ ဓါးပြားရိုက် ဒါမှမဟုတ် ဓါးနဲ့လှီးပြီး ထွက်လာတဲ့အစေးတွေကိုလေနဲ့ဓါက်ပြုစေပြီး ၅-၁၀ မိနစ်လောက်ကြာမှစားရင်ပိုပြီး အကျိုးရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် ပြောတာ ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။
သံလွင်ဆီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ပုံမှန်စားပေးရင်လည်း နှလုံးသွေးကြောကျည်းရောဂါ
ဒီလို သေသေချာချာလေ့လာပြီးဖေါ်ပြပေးတဲ့ ဆရာမကို လေးစားပါတယ်။
ကျုပ်လဲ ကြက်သွန်ဖြူ ကို စွဲစွဲမြဲမြဲစားသူ တစ်ယောက် ရယ်ပါလေ
တစ်ခုရှိတယ် ၊ သမီးရည်းစားတွေ ချိန်းတွေ့ မယ့်နေ့ မျိုးမှာ မစားသင့်ဘူး ။
အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ညစာ စားချိန်မှာ မစားသင့်ဘူး ။ အဲဒါတော့ ကျုပ် အမြင်ပေါ့နော်….
လက်တွေ့ ကြမှု အဖြေ ကိုတော့ ပို့ စ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်အတုံ က ဆက်လက်ဖြေကြားပါလိမ့်မယ် ။
အစ်မ သဲနုအေးရေ … ကြက်သွန်ဖြူကို ကျွန်မလည်း အရမ်းကြိုက်တယ် အစိမ်းသော်လည်းကောင်း ၊ ကြော်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း အရမ်းစားတယ် … ကြက်သွန်ကြော်ကို ပဲကြီးလှော်ဝါးသလိုကို စားနေတာ … ချွေးနံ့တော့ နံ့လား သတိမထားမိဘူး ရယ် …. ။ ချိုင်းကထွက်တဲ့ ချွေးနံ့မနံအောင်သတိထားပြီး တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတာနဲ့ .. တခြားချွေးတွေက နံမနံသတိမထားမိဘူးရယ် ဟီး
ဘကြီးရေ .. ကျွန်မလည်း ကြက်သွန်ဖြူအပြင် ဂျင်းနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ကြိုက်ပါတယ် ။ ဘိတ်ချဉ်လိုမျိုးကိုတော့ အမြဲလိုလိုစားဖြစ်တယ် ဒါပေမယ့် ငရုတ်သီးနဲ့ ဂျင်းက အပူစာဖြစ်လို့ အရမ်းစားမိလျှင် မျက်စိစွန်လာတာမျိုး လည်ချောင်းနာလာတာမျိုး ကြုံရတာ ကိုယ်တွေ့ပါ ။
အန်ကယ်နေချားရေ … ဟုတ်ပါတယ် …ကျွန်မအဲ့ဒီအချက်ထည့်ရေးဖို့ လိုသွားပါတယ် .. ဖြည့်စွက်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ … ။ ကြက်သွန်ဖြူကို ဒီတိုင်းလေသလပ်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပဲ … ဓါးပြားရိုက်၍သော်လည်းကောင်း ၊ မကြေတကြေထုထောင်း၍သော်လည်းကောင်း ၊ ပါးပါးလှီး၍သော်လည်းကောင်း ထားပြီး လေသလပ်ခံမှသာ .. သူကထွက်တဲ့အစေးရည်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ပြုတာပါတဲ့ … အဲ့ဒါလေ … မထည့်မိလိုက်ဘူး … ။
ဆရာထက်ဝေးရေ … အဲ့ဒီ ချာမ ဆိုတာဂျီး မခေါ်ပါနဲ့ လို့ … ဂျီတော့ကနေrequest လုပ်ဖူးပါတယ် … စာရေးတဲ့ လူတိုင်းကို ချာမလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ ….ကျွန်မကိုပြောဖူးတယ်နော် … ဟင့် … စာရေးတာတော့ဟုတ်ပါတယ် … အဲ့ဒီချာမဆိုတာဂျီး ကြားလျှင် ငိုချင်သလိုလို ၊ ရယ်ချင်သလိုလို ၊ မအီမလည်ကြီး ဖြစ်လွန်းလို့ပါ …
ကိုပေရေ .. စားတာတော့စားတာပေါ့နော် … .သူများနဲ့စကားများများပြောရမယ့် အချိန်နဲ့အလုပ်ခွင်လောက်တော့ ရှောင်ပါတယ် .. ကျန်တာတော့ သိဘူး ..ဟီး
etone ရေ အကျိုးရှိစေတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါပဲ
နွယ်ပင်ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူကို အစကတည်းက မကြိုက်လို့ ဟင်းချက်ရင်သာ
ထည့်သုံးဖြစ်ပင်မယ့် သူချည်းဒီအတိုင်းတော့ မစားတက်ဘူးလေ
နောက် သူများတွေလို အသုပ်တွေဘာတွေစားရင်လဲ မစားတက်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့
အခုနောက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်းစားကြည့်ပင်မယ့် စားနေကျမဟုတ်တော့ သိပ်ပြီးအဆင်မပြေလှဘူး
အခုလတ်တလောကတော့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပတ်သက်ရင် ရှမ်းချဉ် (ကြက်သွန်ဖြူချဉ်) တော့ စားဖြစ်နေတယ်
စနိုးတကယ်ကို ဒီနေ့ထိ ကြက်သွန်ဖြူကို လက်ချိုးရေလို့ရတယ် သိပ်မစားဖြစ်ဘူ အနံ့ဆိုးလို့လေ မမပြောသလိုမျိုးဆိုရင် တော့နည်းနည်းပါးပါးစားမှဖြစ်မယ်နော်။။။